» होम आइशोलेशनमा बस्दा कोठा कस्तो हुनुपर्छ ?
होम आइशोलेशनमा बस्दा कोठा कस्तो हुनुपर्छ ?
२६ बैशाख २०७८, आईतवार १३:३६
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर चाडै कम हुने देखिदैन । त्यसकारण हामी आफै जागरुक र समझदार भएर भाइरसलाई जित्नुपर्छ । धेरै मानिसहरु भाइरससँग हिम्मतका साथ लडिरहेका छन् । केहीले त जितेका पनि छन् ।
कोभिड–१९ बाट छुटकारा पाउने एक मात्रै तरिका लकडाउनको पालना गर्नु हो । कयौ मानिसहरु नेपाल, भारत लगायत धेरै देशहरुमा होम आइसोलेशनमा बसिरहेका छन् । तर आइसोलेशनमा बस्दा बिशेष तरिकामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यदि कोही व्यक्ति होम आइसोलेशनमा बसेको छ भने सबै भन्दा त घरका बृद्व र बच्चाहरुको सम्पर्कमा आउनु हुँदैन । किनकी तपाईको परिवारको सुरक्षा तपाईको हातमा हुन्छ । त्यसकारण यो कुरामा विषेध ध्यान दिनुपर्छ ।
होम आइसोलेशनमा बस्नेको कोठा अलग हुनुपर्छ । खाने, सुत्ने र खाने भाँडालाई अलग्गै राख्नु पर्छ । यदी कोही व्यक्ति कोठाको सम्पर्कमा आएमा हात राम्रोसँग धुनुपर्छ ।आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको कोठामा पस्दा ट्रिपल लेयरको मेडिकल मास्क लगाउनुपर्छ ।
भाडाँ माझ्नु परेमा पन्जा लगाएर धुनुपर्छ । भाँडा माझेपछि साबुन वा डिटर्जेन्टले राम्रो सँग सफा गर्नुपर्छ । र पन्जा निकालेर हातलाई राम्रोसँग साबुनले धुनुपर्छ । हेरचाह गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वास्थको आफै ख्याल गर्नुपर्छ । दैनिक शरीरको तापक्रम र अक्सिजन जाँच गरिरहनुपर्छ ।
सबैभन्दा त होम आइसोलेसनमा बस्ने ब्यक्तिलाई चाडै नै ठिक हुन्छ भन्ने महसुस गराउनु पर्छ । नकरात्मक चिजबाट टाढा राखेर सावधान गराईराख्नुपर्छ । परिवारको सुरक्षामा ध्यान दिदै आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिमाथि नकरात्मक शक्ति हावी हुन दिनु हुँदैन ।
प्रदेश २ मा १९ जना प्रहरी र ५६ जना थुनुवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
संक्रमित बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने ?
कोरोना संक्रमित बिरामी बोक्न वडाध्यक्षले दिए निजी गाडी
वीरेन्द्रनगरमा २५ शय्याको कोभिड अस्पतालको सुरुवात
भेन्टिलेटरको अभावमा डोटीमा कोरोना संक्रमित पुरुषको ज्यान गयो